Hal Arin Oo Ka Caawin Doonta Barcelona Inay Soo Ceshato Tababare Pep Guardiola | Laacibnet.net
Hal Arin Oo Ka Caawin Doonta Barcelona Inay Soo Ceshato Tababare Pep Guardiola
Barcelona ayaa isku diyaarineysa inay u dhaqaaqdo Pep Guardiola haddii Manchester City ay ku guuldareysato racfaankii ay ka qaadatay labadii sannadood ee laga mamnuucay tartamada Yurub.
Maxkamada Isboortiga ee CAS ayaa go’aankeeda soo bandhigi doonta isbuucyada soo socda ka dib markii ay City racfaan ka qaadatay ganaaxii ay UEFA ka saartay tartamada Yurub madaama ay ku xadgudbeen sharciga dhaqaale wanaaga kooxaha Yurub.
Guardiola oo shaqada tababare ee Man City kala wareegay Manuel Pellegrini afar sannadood ka hor ayaa galaya sannadkii ugu danbeeyay ee qandaraaskiisa.
Manchester City oo laga qaaday isbuucii la soo dhaafay koobka Premier League ayaa la filayaa inay la fariisato Pep Guardiola dhamaadka xilli ciyaareedkan si ay uga wada hadlaan mustaqbalka.
Laakiin Barcelona oo tababare Quique Setien magacowday bishii Janaayo ayaa kalsooni ku qabta in Guardiola uu ogolaan doono inuu ku soo noqdo magaaladiisa haddii xayiraada City laga saaray Champions League ay sii taagnaato.
Barcelona ayaa kaliya hal jeer ku guuleysatay Champions League sannadkii 2015 tan iyo markii uu tababarahoodii ugu guulaha badnaa uu ka tagay sideed sannadood ka hor ka dib markii uu ku guuleystay 14 gool afar xilli ciyaareed.
Waxayna dareensan yihiin inay sahlanaan doonto inay ka dhaadhiciyaan inuu soo laabto haddii Manchester City ay ku guuldareysato racfaanka ay ka qaadatay ganaaxa laga saaray tartamada Yurub.
Kooxda Pep Guardiola ee Man City ayaa si weyn uga danbeysay xilli ciyaareedkan kooxda horyaalka hanatay ee Liverpool.
moha nur says:
Maumalenayo inay dalban donan pep guardilola waxay ogyihin 5 ciyartoy markay uguyarato inu dalbandono mana ogola qarash badan inay bixiyan barca